Warshad iyo soosaarayaal maraakiibta dhalooyinka shumaca madhan ee muraayadda jumlada ah | Winby
dhalada shumaca dhalada
Muraayadda matte barafaysan ee weelasha dhalooyinka shumaca madhan
Koobkaan shumaca matte ayaa ah mid caan ku ah macaamiisha adduunka oo idil. Waxaan leenahay midabbo badan oo macaamiisha ah oo ay kala doortaan. Dhammaan weelasha shumaca waxaa lagu dhejiyaa dabool alwaax ama bamboo ah. Waxaan sidoo kale siin karnaa adeegyo macaamiishayada ah, sida inaan ku daabacno astaanta shirkadda koobka ama sameynta istiikarada iyo sameynta sanduuqa midabka.
Shayga: A02M 、 A03M 、 A07M
Cabbirka: D6.2CM * H8.1CM 、 D7.2CM * H9.1CM 、 D8.2CM * H9.8CM
Midabka: waxaan samayn karnaa midab la habeeyay.
Muraayada qabow ee qaboojiyaha haysta shumaca madhan
1. Weelka shumaca waxaa lagu samayn karaa cabir iyo midab kala duwan, waxaan aqbalnaa shuruudaha macaamiisha.
2. Weelkan shumaca waxaa lagu sameeyay muraayad qabow iyo daboolka bamboo, dusha sare ee dusha sare ayaa aad u wanaagsan.
3. Waxaan sidoo kale ku daabacan karnaa astaanta macaamiisha dusha sare ee koobka.
Dhalooyinka shumaca waxaa lagu isticmaali karaa shumacyo shidan ama kuwa shidan.
Qurxinta guriga oo dhammaystiran miiska cuntada, maskaxda, miisaska dhinacyada, makhaayadaha iyo hudheelada.
Erey ahaan, cabirka 、 logo 、 midabka dhamaantood waa la habeyn karaa, hubaal waxaan ku siin karnaa tayo wanaagsan, qiimo la taaban karo iyo darajo sare ka dib adeegga iibka kadib.
Dhammaad Qabow / matoor
Waxyaabaha Koobka dhalada qabow iyo daboolka bamboo
Miisaanka 175g 225g 345g
Dabool Daboolka qoryaha ama daboolka bamboo
Midab Cadaan, madow, cawl, waa la habeyn karaa
Isticmaalka Shumaca sameynta / Qurxinta guriga
Dhanka kale, Qalabka shumaca haysta ayaa loo isticmaalaa alaab ceyriin ah oo tayo sare leh iyo muraayadaha qurxoon ee bey'ada u fiican, taas oo xaqiiqdii aan aheyn dhalo ka liita oo aan waxyeello u geysan doonin dadka. Waxaa jira noocyo badan oo ah dhalooyinka shumaca dhalada ah ee aad dooratid, sida dhalooyinka quraaradaha tiirarka ah, dhalooyinka dhalada, dhalooyinka dhalada ah, dhalooyinka shumaca dhalada ah, dhalooyinka dhalada ah ee yankee, iwm.
Waxaa intaa dheer, dhalooyinka shumaca dhalada ah waxaa lagu sameyn karaa saameyn kala duwan, maadama ing qabow 、 la safeeyey 、 lagu buufinayo. Waxaad dooran kartaa saameynta aad jeceshahay. Dabcan, haddii aad rabto inaad ku daabacdo astaantaada ama sumadahaaga koobka dhalada, sidoo kale waan sameyn karnaa. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad noosoo dirto nashqadahaaga, waxaan kuu sameyn karnaa tixraac ahaan.
Intaa waxaa dheer, waxaad u dooran kartaa dabool kala duwan alaabtaada. Waxaan leenahay daboolka baasaboorka lid daboolka alwaax lid daboolka biraha, kuwaas oo ku qurux badan dhalada dhalada.
Ugu Dambeeyay, oo ku saabsan xirxirida, waxaan u adeegsanaa tiirarka hawada bacda xumbada si aan ugu duubno dhalooyinka shumaca dhalada si looga fogaado waxyeelo inta lagu jiro gaadiidka. Waxaan ilaalin doonnaa badeecada inta ugu badan, si badeecada si ammaan ah loogu gaarsiiyo macaamiisha.
Waa kuwan qaar ka mid ah faallooyinka wanaagsan ee macaamiisheena:
Hore: Qalabka Xarunta Shumaca Wick ee loogu talagalay sameynta shumaca
Xiga: Dhalada dhalaalaya oo shumac shidan shumac dabool leh
Jar galaas Shumaca Madoow
Jar Glass Shumaca Iyadoo dabool alwaax
Dhalooyinka Caagga ah ee Dhalada ah
Jar Shumaca Muraayadaha madhan
weelka shumaca muraayadda madow
Multi-size cad Matte Frosted Glass Shumaca weelka ...
weel shumac madhan oo dhalaalay
galaas matte frosted shumaca madhan haya-champag ...
weelka shumaca dhalada ah ee dhalada lagu buufiyo oo cabbirkoodu badan yahay
500ml dhalooyinka shumaca dhalada ah